kider Kurzgeschichte – Wettbewerb Drachen Steigen Lassen
Tantara fohy ho an'ny ankizy - manidina papango
Amin'ny vanim-potoana fahitalavitra, solosaina, serivisy streaming ary finday avo lenta, indraindray dia tsy raharahiana ireo zavatra manan-danja. Anisan'izany ny famakiana boky tsara. Na izany aza, ny fanadihadiana nataon'ny Foundation Foundation dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny famakiana. Ary tonga amin'ny famaranana mazava ny fandinihana: ny famakiana mafy dia mampiroborobo ny faniriana sy ny fahavonona hamaky.
Tantara fohy an'ny ankizy - manidina fifaninanana kite
Arakaraka ny namakiana ny ankizy teo aloha no tsara kokoa. Ary izay mahay mamaky teny ihany no afaka mandray anjara amin'ny fiaraha-monina sy ny haino aman-jery ary mahatakatra zavatra. Mifalia amin'ny famakiana ny tantarantsika fohy:
Ny fifaninanana kite amin'ny havoana kely
Mindy dia afaka nanidina ny sidina voalohany voalohany herinandro lasa izay. Tsy maintsy niandry ela izy satria tsy ampy ny rivotra vao afaka nampiasa ilay papango. Rehefa nasehon'ny renin'i Mindy azy ny afisy nanambara fifaninanana kite, dia tena te handray anjara amin'ilay fifaninanana izy. Mindy dia nanana herinandro hanomanana ny tenany sy ny kite amin'ny fifaninanana.
Kitapo manidina tantara fohy - © benik.at / Adobe Stock
Nampiasàny ny fotoana ary nanovany fanovana vitsivitsy ny kite. Faly be i Mindy tamin'ny fijeriny, saingy hitany fa afaka mampiasa asa-make-up izy. Noho io antony io dia nampiasa borosy sy loko indray i Mindy mba handravahana bebe kokoa ilay dragona. Taorian'ny fepetra fanatsarana vitsivitsy dia afa-po tanteraka tamin'ny fisehoan'ny fiaramanidiny i Mindy. “Eny, amin'izay no ahazoako manao soa amin'ny fifaninanana kite. Toa tsara ny kite », hoy i Mindy faly.
Tamin'ny andron'ny fifaninanana dia noraisin'i Mindy ny papainy ary niara-nandeha tamin'ny reniny nankany amin'ilay havoana kely izy. Teo amin'io havoana io no nanombohan'i Mindy ny kite voalohany. Ny afisy nanao dokam-barotra ny fifaninanana dia nanambara mazava fa tsy maintsy misoratra anarana amin'ny fifaninanana kite ianao. Mindy sy ny reniny nandeha nisoratra anarana. Nisy latabatra roa natsangana teo an-tampon'ny havoana ary nisy olona nipetraka teo ambonin'izy ireo. Betsaka ny endrika eo amin'ny latabatra.
“Salama, te hisoratra anarana amin'ny fifaninanana ny zanako vavy. Tonga eto ve isika? ”, Hoy ny renin'i Mindy. "Eny, tonga tamin'ny toerana mety ianao," hoy ny navalin'ny vehivavy iray izay toa iray tamin'ireo mpikarakara ny fifaninanana. "Mba fenoy ity takelaka fisoratana anarana ity." Natolotr'ilay vehivavy taratasy kely ny renin'i Mindy. “Hikarakara an'io aho, ry malalako. Raha tianao dia afaka mahita toerana sy manomana ny kite anao ianao. ”“ Eny ary, hataoko izany, ”hoy i Mindy namaly.
Araka ny nambara dia nikarakara ny fisoratana anarana ny renin'i Mindy mba hahafahan'i Mindy mandray anjara amin'ny fifaninanana kite amin'ny havoana kely. Mindy dia nanomana ny fiaramanidiny ho amin'ny fifaninanana ho avy. "Vonona ve ianao?" Hoy ny fanontanian-drenin'i Mindy. “Eny, rahoviana no manomboka izany?” “Adiny iray eo ho eo. Eto amiko ny lalàna mifehy ny fifaninanana. "
"Ary inona avy ireo lalàna?", Hoy i Mindy. “Hovakiko aminao ity, ry malalako. Toy izao ny fifaninanana. Raha vantany vao voantso ny laharanao fanombohana dia mankanesa any amin'ilay faritra voamarika eo aloha. Asehoy ireo mpitsara telo ny kite-nao. Hijery akaiky ny papango ianao ary handinika ny fisehoany. Avy eo ny mpitsara dia te hahita raha afaka manidina ny kite anao. Ity no fotoana tsy maintsy andefasanao ny kite anao eny amin'ny habakabaka. Ka ny mpitsara koa dia mijery hoe hatraiza ny sidina azafady. Amin'ny farany dia miampy ny isa rehetra an'ny mpitsara. Azonao ve izany? "
“Ie, azoko izany. Mbola manana fanontaniana iray fotsiny aho. Inona no laharana fanombohana ananako? ”Nijery ny fisoratana anarana ny renin'i Mindy, izay nahazoany kopia iray. “Manana ny laharana faha-15 ianao ry malalako.” “Fanombohana isa 15? Avy eo dia elaela aorian'ny nanombohan'ny fifaninanana alohan'ny anjarako. "" Marina izany. Azonao atao ny mijery ny dragona hafa. Aorian'ny anao, zaza vitsivitsy no azo antoka fa handray anjara amin'ity fifaninanana ity miaraka amin'ireo sakaizany.
Rehefa afaka adiny iray dia nanomboka ny fifaninanana kite. Mindy dia nijery ireo mpandray anjara hafa sy ny sakaizany. Ny ankizy sasany dia manana dragona tsara tarehy izay tsara tarehy farafaharatsiny tsara toa an'ilay dragona an'i Mindy. Hitan'i Mindy fa sarotra ny handresy ity fifaninanana kite ity, saingy tsy izany no tanjony.
Ho ampy ho azy ny nahazo isa tsara ho an'ny kite amin'ny mpitsara. Ny naoty tsara dia mety ho fahombiazana lehibe ho an'i Mindy satria efa nahafoy fotoana betsaka tamin'ny fandokoana ny papangoany.
Mindy manokana dia nahatsikaritra dragona iray satria tena tsara tarehy izy io. Rehefa afaka kelikely, nantsoina ny laharam-panombohan'i Mindy. “Anjaranao izao ry malalako. Mirary fahombiazana ho anao aho. ”Nisaotra ny reniny i Mindy, nandray ny fiaramanidiny ary nankany amin'ilay faritra voamarika. Nasehony an'ireo mpitsara telo ny kite-ny, ary tamin'izay dia nibanjina azy tsara izy ireo ary nihatokatoka afa-po, izay midika fa tian'izy ireo ilay kite.
"Mba avelao hanidina ny kite anao izao", hoy ny mpitsara iray. Natsipin'i Mindy tany amin'ny habakabaka ny sidiny ary nihazakazaka izy, fa ilay kite kosa niantsona tamin'ny tany rehefa afaka fotoana fohy. Tsy ampy ny rivotra izay tsy azon'ny dragona an'i Mindy tany an-danitra, fa ny iray tamin'ireo mpitsara kosa dia nilaza tamin'i Mindy fa tsy maninona izany.
Nolazaina tamin'i Mindy fa tokony hiandry kely fotsiny amin'ny rivotra mety izy. Rehefa afaka minitra vitsy dia nisy rivotra bebe kokoa ary natombok'i Mindy ny fanandramana faharoa. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nahavita namoaka ilay kite tamin'ny rivotra izy ary talanjona ireo mpandray anjara hafa tamin'ny fahaizan'ny sidintsidina Mindy. Nandray naoty ireo mpitsara ary nilaza tamin'i Mindy mba haka ny fiaramanidiny avy any an-danitra satria anjaran'ny mpifaninana manaraka izany.
"Mihevitra ve ianao fa manana vintana ny kite-ko? ”Nanontany an-dreniny i Mindy. “Heveriko izany ry malalako. Toa afa-po ianareo mpitsara. Mpandray anjara efatra izao no hanolotra ny kitapony. Avy eo dia misy fiatoana kely kely mba hahafahan'ny mpitsara manapa-kevitra amin'ny mpandresy. "
"Manantena aho fa handresy ny dragona," hoy ny fieken'i Mindy. Nangataka ireo mpandray anjara ireo mpitsara telo mba handeha any amin'ilay faritra voamarika. "Nanapa-kevitra izahay. Ny laharana fahatelo dia an'ny kite-n'i Max. ”Nankany amin'ny mpitsara i Max ary naka ny taratasy fanamarinana.
"Ny toerana faharoa dia mankany amin'ny dragona avy any Mindy." Mindy faly noho ny hafaliana. Vitany ny nandresy lahatra ireo mpitsara tamin'ny kite-ny. Noraisin'i Mindy ny taratasy fanamarinana. "Ny laharana voalohany dia an'ny kite-n'i Manuel."
Ilay kite izay hitan'i Mindy tsara tarehy indrindra dia nandresy tamin'ny fifaninanana kite. Faly tokoa i Mindy tamin'ny toerana faharoa ary nanapa-kevitra ny hanidina ny kite imbetsaka raha avelan'ny toetr'andro.
Ampidino ny tantara fohy "Avelao ny sidina hanidina" ho rakitra PDF
Pejy fandokoana manidina kite | fararano
Manidina kite | Fararano fialamboly
Pejy fandokoana manidina kite | fialam-boly
Pejy fandokoana dragona | Zavaboary angano
Dragona pejy fandokoana
Dragona pejy fandokoana | Zavaboary angano